Ukukhuselwa kwedatha kunye nokugcinwa kwemfihlo koMsebenzisi kunokwenzeka kwidatha yabo. Ulwazi kufuneka lufumaneke ngexesha lokuhlala kwabathathi-nxaxheba kwisiza okanye xa besebenzisa izixhobo zeProjekthi yeAvalanches yasimahla yoLuntu kunye nemisebenzi yayo.
Ayililo ijelo losasazo. Abasebenzi bethu abanalo ibhodi yokuhlela yokwenza ukuhlela kumanqaku aluncedo. Oovimba abanoxanduva ngokuthe ngqo kwimathiriyeli eposwe kumaphepha ayo.
Umgaqo wokukhuselwa kolwazi (emva koku obizwa ngokuba nguMgaqo-nkqubo) ubandakanya idatha efunyanwa yiprojekthi yeAvalanches kuMsebenzisi xa unxibelelana noMthombo. Umsebenzisi kufuneka asebenzise iinkonzo, iimveliso, okanye amanqaku eAvalanche (emva koku ebizwa ngokuba yiProjekthi okanye sisixhobo). Izixhobo kufuneka zigqibe naziphi na izivumelwano okanye izivumelwano kunye nabathathi-nxaxheba beprojekthi ukukhusela idatha yabo.
Iprojekthi yeAvalanches ikhusela ngokukodwa idatha yabathathi-nxaxheba kwaye ihlonipha ilungelo labo lokuba yimfihlo. Kungoko ke iPolisi ifumene inkcazo:
Idatha yelungu, eqhutywa sisixhobo seAvalanches
iinjongo zokuqhubekeka nokuqokelela idatha xa umsebenzisi esebenzisa iAvalanches Resource;
umgaqo apho ulwazi olufunyenwe kwiwebhusayithi yeProjekthi yeAvalanches lucutshungulwa.
Sebenzisa uMthombo, uMsebenzisi uyavuma kwaye uyavuma ukwenziwa kwedatha yakhe ngokuzithandela. Uluhlu lwezi datha luchaziwe kulo Mgaqo-nkqubo. Ukuba kukho ukungavisisani, umntu othabatha inxaxheba makayeke ukundwendwela iwebhusayithi yeProjekthi okanye afikelele kwiProjekthi kwiphepha lethu le-Facebook imiyalezo ngqo: https://www.facebook.com/avalanches.global
IziVavanyo zoVimba zihlaziya kwaye ziqokelele idatha yobuqu ngentlonipho enkulu. Oku malunga:
idatha efunyenweyo xa umsebenzisi egcwalisa iifom zobhaliso, ugunyaziso kunye nokuchongwa koMsebenzisi kwesi siza;
idatha evela kwiifayile zecookie;
Iidilesi ze-IP kunye neendawo.
Idatha yobuqu yabasebenzisi ye-Avalanches.com igcinwa kwiiseva ezikhuselekileyo.
Abasebenzisi beAvalanches.com kufuneka bayazi inyani yokuba ezinye amakhonkco apapashwe kwiQonga lethu anokukhokelela kwizibonelelo ezinokubakho ezingakhuselekanga (iwebhusayithi, usetyenziso, njl. Iqonga lethu alithathi xanduva lwedatha evunyiweyo okanye nasiphi na esinye isiphumo sokulandela amakhonkco apapashiweyo apapashwe ngabasebenzisi bethu kwi-avalanches.com.
Le data siqu Avalanches.com abasebenzisi platform ngamnye adluliselwa yi zekhephu LP ukuba angamelwa umntu obhaliswe phantsi kwemithetho yeRiphabliki Ireland, i-ofisi yayo obhalisiweyo kwi Ofisi 29, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, I-D02 XT91 (apha-Inkampani). Inkampani ingumnini weSiseko seDatha esigcina i-Avalanches.com yeDatha yoMsebenzisi.
Idatha yomsebenzisi enokuqwalaselwa yiProjekthi yeAvalanches
Ulwazi olunje ngedilesi ye-imeyile yomsebenzisi okanye inombolo yefowuni kunye negama lokugqitha zibalulekile ekwenzeni iakhawunti. Akunakwenzeka ukuba ube ngumsebenzisi we-avalanches.com ngaphandle kokwabelana ngedatha enjalo.
Naluphi na ulwazi olunikezwe ngabathathi-nxaxheba ngokuzithandela, ngobuqu, kwaye ngokunxulumene nomntu uthathwa njengedatha yobuqu yomthathi-nxaxheba. Abasebenzisi bethu bathatha uxanduva olupheleleyo ngedatha yabo yobuqu ebonelelwe kwi-avalanches.com.
Inombolo yefowuni iyafuneka ukuba inikezwe ukuze kuqinisekiswe umsebenzisi kwaye inike ukufikelela kwiinkalo ezipheleleyo zeenkonzo zethu.
Idatha yobuqu yomthathi-nxaxheba oza kulungiswa iyaqwalaselwa njengedatha enikiweyo ngexesha lobhaliso okanye kwinkqubo yokusebenzisa uMthombo. Iinkcukacha zigqithiselwa kwaye zithunyelwe ngabathathi-nxaxheba kwisiza ngokuzithandela, kubandakanya ulwazi oludluliselwe kuMthombo ovela kwezinye iinkonzo ze-Intanethi okanye iinethiwekhi zentlalo (i-imeyile, ifoto, igama, isini, ubudala, isidanga semfundo, njl.njl.).
Idatha ethunyelwa ngokuzenzekelayo kwiProjekthi ngelixa usebenzisa isiza ikwasetyenziselwa ukuqhutywa. Idatha idluliselwa yisoftware yomthathi-nxaxheba efakwe kwisixhobo sakhe. Oovimba abazenzekelayo bafumana olu lwazi lulandelayo:
Idilesi ye-IP yelungu
idatha evela kwiicookies;
iiparameter zobugcisa zezixhobo zomsebenzisi;
Ulwazi malunga nesoftware esetyenziswe ngumthathi-nxaxheba weprojekthi;
umhla nexesha lokufikelela kwiAvalanche;
Imbali yokusebenzisa kunye nezicelo zamaphepha, kunye nolunye ulwazi lwendalo efanayo.
Iprojekthi yeAvalanches ayiqinisekisi ukuchaneka kwedatha yobuqu ebonelelwe nguMsebenzisi. Xa usebenzisa kwaye ubhalisa kwiProjekthi, abathathi-nxaxheba baqinisekisa ukugqibelela kunye nokuhambelana kolwazi olunikezwe buqu.
Ukunikezela kunye neeNtengiselwano: Ukuze usebenze njengeqonga lezentengiselwano, ukutshintshiselana ngotshintshiselwano, okanye ukunikezelwa, iqonga ligunyazisiwe ukubonisa ulwazi loqhakamshelwano loMsebenzisi, olubalulekileyo ukuqala isivumelwano phakathi koMthengi kunye noMthengisi. Abasebenzisi banoxanduva olupheleleyo lolwazi lokunxibelelana olunikezwe kwiwebhusayithi. Umsebenzisi kufuneka aqonde ukuba ulwazi loqhakamshelwano okanye idilesi yasekhaya inokwenziwa ifumaneke esidlangalaleni kwiQonga lethu ukuze siqhube iidili.
Emva kokuba uMsebenzisi edibene nenkxaso yeQonga, iqonga ligcina igunya lokucela ulwazi olongezelelweyo lomntu ukuze aqhubeke nokuqinisekisa umsebenzisi.
Idatha yomsebenzisi evela kwiiprofayili eziphumayo ezazisetyenziselwa ukubhalisa iprofayili yomsebenzisi kwi-avalanches.com zisebenzisa iinkonzo zokungqinisisa (i-Facebook, uGoogle, njl.
Iinjongo zokuqhubekeka kwezixhobo zeAvalanches zezi:
Ukuchongwa komthathi-nxaxheba kwiProjekthi, kunye nezivumelwano nezivumelwano noMthombo.
Ukunikezelwa koluhlu olubanzi lweenkonzo kunye nokuphunyezwa kwezivumelwano ezahlukeneyo okanye izivumelwano kunye nomthathi-nxaxheba.
Ukunxibelelana noMsebenzisi, kubandakanya izicelo kunye nezaziso, kunye nokuthumela ulwazi olulawula ukusetyenziswa kwesiza, ukwenziwa kwezivumelwano kunye nezivumelwano, kunye nokulungiswa kwezicelo kunye nezicelo ezifunyenwe kulowo uthatha inxaxheba.
Ukuphucula umgangatho weMithombo, ukusebenza kwayo, umxholo kunye nomxholo wolwazi.
Ukudalwa kwezinto zokwazisa ezijolise kubaphulaphuli abanomdla.
Ukuqokelelwa kwedatha kwizifundo ezahlukeneyo, kubandakanya ubalo, ngokusekwe kwidatha engaziwayo.
Ulwazi olungasetyenziswanga okanye luqokelelwe yiAvalanche
Idatha yomsebenzisi malunga nelifa lemveli, umbono wezopolitiko kunye neenkolelo, ukuthatha inxaxheba kumaqela ezopolitiko, imibutho yabasebenzi, njl.
Iindlela, inkqubo, kunye neemeko zokuqhubekeka kwedatha yomsebenzisi
Izixhobo zeAvalanches ziqokelela kuphela idatha ebonelelwe ngabathathi-nxaxheba ngokuzithandela ngexesha lokubhalisa okanye ukungqinisisa kwiwebhusayithi yeAvalanches okanye kwiiakhawunti zezinye iinkonzo ze-Intanethi, kunye nedatha edluliselwa ngokuzenzekelayo kwiZibonelelo ukusuka kwizixhobo nakwisoftware yomthathi-nxaxheba. inkqubo yokusebenzisa isiza (ikuki kunye nezinye iintlobo zedatha echazwe kuMgaqo-nkqubo wabucala).
I-Avalanche igcina idatha iyimfihlo ngemigaqo yangaphakathi.
Ukugcinwa kweenkcukacha ziyimfihlo, ngaphandle kwaxa uMsebenzisi eye wavuma ngokuzithandela ekuchazweni kolwazi oluthile lokufikelela koluntu kwisiza okanye ngemisebenzi yalo.
Iimeko zokudlulisela idatha yomsebenzisi kwiqela lesithathu
Ukugqithiselwa kwedatha yoMsebenzisi kubantu besithathu kunokwenziwa kwiimeko ezilandelayo:
Umsebenzisi ukuvumile ukugqithiselwa kwenxalenye yedatha yakhe.
Ukusetyenziswa kamnandi kokusebenza koovimba okanye ukwenziwa kwesivumelwano okanye isivumelwano.
Ukuhanjiswa kuyimfuneko ukubonelela umthathi-nxaxheba ngeenkonzo okanye imisebenzi yoNcedo olunikezelwa ngamaqabane esiza esihambelana nendawo yezobuchwephesha. Idatha yobuqu inokutshintshelwa kusetyenzwa okanye kufezekiswe iinjongo, ezimiselwe sisiVumelwano soMsebenzisi kunye neenkonzo ezihambelanayo.
Ukutshintshelwa kubonelelwa yimithetho yelizwe loMsebenzisi apho ahlala khona okanye okunye okusebenzayo.
Amaqela esithathu angadlulisela kwidatha yobuqu efunyenwe ngeentlobo ezahlukeneyo zezifundo okanye imilinganiselo, kubandakanya amanani, ukuhlalutya kunye nokunikezelwa kweenkonzo okanye ukusebenza kwimiyalelo yeProjekthi;
Oovimba banciphisa ukufikelela kulwazi lwabathathi-nxaxheba, ukuvula ukufikelela kuphela kubasebenzi besiza kunye namaqabane afuna olu lwazi ukwenza umsebenzi okanye ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kweProjekthi.
Iimeko zokufikelela kwiDatha yomsebenzisi ngabanye abasebenzisi
Idatha yomsebenzisi inokufikelelwa ngomnye uMsebenzisi wePlatifomu kwicandelo eliLungileyo lewebhusayithi ye-avalanches.com ukuze aqalise iDili phakathi kwezi zimbini. Olo lwazi alunakuba lwazi ngaphandle kolwazi lonxibelelwano (idilesi ye-imeyile, inombolo yefowuni, okanye amakhonkco eendaba ezentlalo) kunye nedilesi yendawo.
Iqonga ligcina ilungelo lokwabelana ngedatha yomsebenzisi eyimfihlo kunye nabasemagunyeni ngokomthetho wasekhaya: ukumisa nokuzisa uxanduva kubasebenzisi bobuqhetseba, ukulungisa ukungavisisani, okanye ukubuyisela iimpikiswano ezinokuthi / zaphule imithetho yendawo. Kwakhona, iPlatform inokuchaza idatha yomsebenzisi ngokufumanisa iinjongo zabo ezingekho mthethweni ezenzeka kwiWebhusayithi okanye ngokufumana izikhalazo kwabanye abasebenzisi beqonga.
Ukugcinwa, ukususwa, kunye nokulungiswa kwedatha yomsebenzisi
Umsebenzisi unelungelo kunye namandla nangaliphi na ixesha lokusebenzisa isiza ngokuyinxenye okanye ukutshintsha ngokupheleleyo idatha yakhe esebenzisa umsebenzi wokuhlela iakhawunti xa undwendwela iAkhawunti yobutyebi.
Umsebenzisi unelungelo kunye nethuba nangaliphi na ixesha lokucima ngokupheleleyo idatha yakhe ayinikiweyo xa ubhalisa kwiwebhusayithi yeProjekthi ngokususa iakhawunti. Nangona kunjalo, oku kungakhokelela kuthintelo lokufikelela komthathi-nxaxheba kwimisebenzi ethile yesiza.
Idatha yobuqu igcinwa ngalo lonke ixesha usebenzisa iakhawunti kwisiza. Ikwagcina idatha engadingi nxaxheba ebhalisiweyo okanye naliphi na inyathelo elineemvumelwano okanye izivumelwano. Ukupheliswa kokusetyenziswa kunye nokupheliswa kwezivumelwano zomsebenzisi zeakhawunti kwiwebhusayithi yeZibonelelo kuthathwa njengenyaniso yokususwa kweakhawunti yelungu.
Izinto zokubala, iicookies, iinethiwekhi zentlalo
Amaphepha eProjekthi aqokelela ngokuzenzekelayo ulwazi malunga nokusebenza kwendawo kunye nokusebenzisa ii-cookies. Idatha efunyenwe ngoncedo lwabo yenzelwe ukubonelela abathathi-nxaxheba ngemisebenzi eyenzelwe wena, ukuphucula, ukuvelisa imikhankaso yentengiso, kunye nokuqhuba izifundo ezahlukeneyo.
Ukusetyenziswa kwemisebenzi ethile yeziBonelelo kunokubonelelwa kuphela xa iicookies zivunyelwe kwaye zamkelwe. Ukuba umthathi-nxaxheba uyakuthintela ukufunyanwa okanye ukwamkelwa kweicookies ngokutshintsha iisetingi zesikhangeli, ukufikelela koku kusebenza kwesiza kunokuthintelwa.
Iicookies kunye nezinto zokubala ezibekwe kumaphepha ewebhusayithi yeProjekthi zinokusetyenziselwa ukuqokelela, ukuqhubekeka, kunye nokuhlalutya ulwazi olufunyenwe kunxibelelwano lwabathathi-nxaxheba kwiwebhusayithi, ukuqinisekisa ukusebenza kwemisebenzi yayo okanye ngokubanzi. Iiparamitha zobuchwephesha beemitha zisetelwe yiProjekthi kwaye zinokutshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili kuMsebenzisi.
Njengenxalenye yomsebenzi wesiza, kukho izinto ezinje zenethiwekhi yoluntu njenge «Yabelana» amaqhosha kunye neenkqubo ezisebenzisanayo zokunika izimvo kunye nokulandelela impendulo yabathathi-nxaxheba kulwazi olufunyenweyo. Izinto zenethiwekhi yoluntu zibhalisa idilesi ye-IP yoMsebenzisi, ulwazi malunga nomsebenzi wakhe kunye nokunxibelelana neWebhusayithi yezixhobo, kunye nokugcina ii-cookies ukuqinisekisa ukusebenza ngokukuko kwezi zinto kunye neenkqutyana. Ukusebenzisana koMsebenzisi kunye neendlela zonxibelelwano zilawulwa ngumgaqo-nkqubo wabucala wezixhobo kunye neenkampani ezibabonelelayo.
Amanyathelo oKhuseleko lweDatha yomsebenzisi
Oovimba bathatha amanyathelo obuchwephesha kunye nemibutho ukuqinisekisa inqanaba elifunekayo lokukhuselwa kwedatha yobuqu neyimfihlo kwizenzo ezingekho mthethweni zomntu wesithathu okanye i-malware, umzekelo, ukutshabalalisa, ukuvimba, ukuguqula, ukukopa, ukuhambisa okanye ukufikelela ngengozi, kunye nabanye.
Utshintsho kuMgaqo-nkqubo lunokuchaphazeleka yimithetho yamazwe apho ukufikelela kwiwebhusayithi yeProjekthi kuvulekile okanye iimfuno zomthetho wamanye amazwe.
Oovimba bolondolozo banelungelo lokuhlela uMgaqo-nkqubo wangoku. Xa usenza utshintsho olufanelekileyo kuhlelo lwangoku, umhla wohlaziyo lokugqibela lubonakalisiwe. Ushicilelo olutsha luqala ukusebenza ukusukela nje xa lupapashwa kwisiza ukuba oku akuphikisani nenguqulelo entsha yoMgaqo-nkqubo kunye nemithetho yamazwe apho ukufikelela kwiwebhusayithi yeProjekthi kuvulekileyo.
Abahleli bezixhobo banelungelo lokungashicileli umxholo (amanqaku, amagqabantshintshi, iingxelo, njl.
Ukuvuselela ungquzulwano phakathi kwezizwe okanye ezomkhosi;
ukuxhatshazwa ngokwasemzimbeni okanye ngokwasemzimbeni;
ukuthunyelwa kwezenzo zobunqolobi, ukonakalisa izinto, ukungathobeli eluntwini;
ukurhweba ngabantu, ubukhoboka, okanye iphonografi.
Abahleli banelungelo lokungashicileli naluphi na olunye ulwazi olophula umthetho-sikhokelo welizwe lokuhlala loMsebenzisi okanye lomthetho wamanye amazwe.
Uxanduva lwezixhobo kunye noMsebenzisi
Naluphi na ulwazi oluthatyathwa ngumthathi-nxaxheba kwisiza egameni lakhe, ubeka kwiwebhusayithi yeProjekthi ngokuzithandela. Ulwazi luya kupapashwa ukuba umthathi-nxaxheba udlulisa isigunyaziso seSMS kunye nesiqinisekiso sendawo ahlala kuyo ngezivumelwano kunye nemigaqo yokubekwa koovimba. Kwixesha elizayo, umntu othabatha inxaxheba unoxanduva lokuchaneka kwemathiriyeli epapashiweyo.
Abahleli beProjekthi abanoxanduva lokuchaneka kwengcaciso ethunyelwe kule ndawo.
Imigaqo yeProjekthi iyakwalela ukukopa nokuthumela kumaphepha olwazi lwezixhobo oluwela phantsi komthetho welungelo lokushicilela.
Imithetho yeziBonelelo iyakwalela ukukopa nokusasaza ulwazi olusuka kumaphepha ewebhusayithi ngaphandle kokufumana ulwazi kunye nemvume yombhali.